News Archives - Page 11 of 13 - Enepali Online
नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भनेझैं, नब निर्वाचित डा. बाबुराम भट्टराईले ३ करोड नेपालीलाई दंग पार्दै गरे एक्कासी यस्तो घोषणा, के भट्टराईले साँच्चिकै गर्लान् त ? काठमाडौँ, २८ मङ्सिर- गोरखा क्षेत्र नम्बर २ का विजयी उम्मेदवार नयाँ शक्ति संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सबै नेपालीको घर नबनेसम्म आफू डेरामा नै बस्ने घोषणा गरेका छन् । उनले प्रत्येक महिना जनताको समस्या बुझ्न गोरखा आउने घोषणा पनि गरे ।आफू निर्वाचित भएको क्षेत्र र गोरखाको विकासका लागि आफूले अग्रसरता लिने उनले…
"नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भनेझैं, नब निर्वाचित डा. बाबुराम भट्टराईले ३ करोड नेपालीलाई दंग पार्दै गरे एक्कासी यस्तो घोषणा, के भट्टराईले साँच्चिकै गर्लान् त ?"
काठमाडौं- सरकारले चीनसँगका सीमामा सडक जोड्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको सरकारले व्यापार बढाउने रणनीतिअन्तर्गत करिब एक दर्जन नाकासम्म सडक पुर्‍याउने योजना बनाएको हो। चीनसँगको केरुङ नाकामात्र सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा अन्य नाकामा पनि सडक सञ्जालले जोड्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाएको छ । तातोपानी नाका करिब दुई वर्षदेखि बन्द छ भने मुस्ताङको कोरला नाकासम्म सडक पुगे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पाँच नाकामा दुई वर्षभित्रै सडक पुर्‍याउने योजना…
"अव पर्नु पर्दैन भारतको भर,चीन जोड्न दर्जन सडक तिव्र रुपमा निर्माण हुँदै"
चितवन, २८ मंसिर – चितवन क्षेत्र नं ३ बाट विजयी सांसद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनबाटै दुई वटा रेल कुद्ने सपना पूरा हुने बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विजयी र्यालीका क्रममा भरतपुर–९ स्थित वडा कार्यालयमा पुगेर चितवनवासीको रेल चढ्ने सपना विपनामा परिणत हुने बताए । उनले भने, ‘चितवन एउटा लुम्बिनीबाट र अर्को काठमाण्डुबाट आउने रेलको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्छ । अब चितवनबाटै सरर दुईवटा रेल कुद्ननेछ ।’ नेता प्रचण्डले चुनावको बेला आफूले…
"चितवनबाट प्रचण्डले गरे तिन करोड नेपालीका लागि यस्तो खुसीको कुरा"
कोरिया जाने कामदारको सीप परीक्षण एक वर्ष पछि धकेलियो 2020 देखिका परीक्षार्थीहरु का लागि – काठमाडौं । दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारका लागि सीपमा आधारित परीक्षा प्रणाली लागू गर्न एक वर्ष ढिलाई हुने भएको छ । कोरियाले सन् २०१९ देखि नेपालबाट कामदार लैजाँदा सीप र भाषा दुबैलाई परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । तर, नेपालको कमजोर तयारीले थप एक वर्ष ढिलो हुने अवस्था आएको हो । नेपालले प्राविधिक तयारी गर्न अप्ठ्यारो हुने भन्दै सन् २०२०…
"कोरिया जाने कामदारको सीप परीक्षण एक वर्ष पछि धकेलियो"
काठमाडौ/ पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा रबि लामिछाने र दिल निशानीको जुहारीले मिडियामा तरङ्ग पैदा गर्यो । रबि लामिछाने अनागरिक हुन भन्ने प्रसङ्गले रबिका फ्यानहरुलाइ चिड्यायो र दिल निशानी मगरलाई संजालमा बिरोध गर्नेहरुको लहर नै कुर्लियो। तर यता दिल निशानी मगरले भने रबि लामिछाने अनागरिक भएको अकाट्य र ध्रुब सत्य छ भनिरहेका छन। रबि लामिछानेको पत्रकारिताले राष्ट्रिय संबेदनसिलता माथी प्रश्न उठाएको दाबी समेत गरिरहेका छन । बामपन्थी सरकार निर्माणका लागि आफुले भोट हालेको समेत बताउने लेखक…
"रबि लामिछानेलाई दिल निशानीको कडा जबाफ ‘रबि अनागरिक नै हुन’ (हेर्नुहोस भिडियो सहित )"